Soft yokhuselo lead ingubo enemikhono emide kunye mbeje - China Shandong Chen lu
Soft yokhuselo lead ingubo enemikhono emide kunye emide
It yenziwa irabha zendalo, danfen emthubi kusingathwa processing.
esilingana Lead: 0.25 MMPB, 0,35 MMPB, 0.5mmpb, okanye ezahlukeneyo elingana ukhuselo ngokuxhomekeke kwiimeko ezizodwa. esetyenziselwa ikakhulu nokhuseleko X-ray, abasebenzisi ungakhetha iinkcukacha ezahlukeneyo iimveliso yokhuseleko series. multi-Umaleko izinto lwangaphakathi ngamazwe amatsha yokhuselo, umsebenzi oncomekayo yokhuselo;
Ubukhulu: S, M, L, INumeri ezizodwa ungenziwa ngemfuneko.
Shandong Chen lu isixhobo zonyango co., Ltd yinkampani iingcali ukuvelisa X ray iimpahla zokuzikhusela (lead impahla yerabha) zamashishini amakhulu, kuquka uhlobo olutsha lwe X-ray impahla ekhuselayo liyifumene amalungelo abenzi yesizwe, isiqinisekiso epheleleyo inkampani kungenziwa qiniseka ukuthenga! Nceda uqhagamshelane nathi ukufumana iinkcukacha!
Ifowuni: 0535-8982222 / 8522678
Previous: uhlobo entsha Chen lu kaThixo lead yokhuselo ingalo protection ingalo
Okulandelayo: I-soft yokhuselo itanki yipeyinti anti-banxibe
Iimpahla Lead Kuba X Protection Ray
Iimpahla Lead Price
Clothing Lead kukhuseleko
ndikhaphe zokhuseleko Series
Lead irabha Jacket
sleeve Long lead idyasi kwicala elinye
Medical Clothing Lead
Lead Medical Iimpahla kukhuseleko
Medical-Ray zokhuseleko Products
Nuclear imisebe zokhuseleko
Imitha Protection Lead Clothing
Imisebe Protection Products
Iimpahla iwodi Protection
Ray imisebe Iimpahla Lead
Soft sleeve elide lead idyasi
X Ray Clothing Lead
X Ray zokhuseleko Equipment
Ukukhuselwa X-reyi ndikhaphe ingubo
Le iiglavu anti-radiation ithambile ngomnwe ...
Uya kwambatha radiation-ubungqina chen lu iye s okulungileyo ...
Chen lu embalwa izixhobo zokhuselo lead jacket ...